कलाकार राजारामको एनटिभीसँग गुनासोःसमय बेच्नु गलत
गफगाफ - राजाराम पौडेल पछिल्लो समय चलचित्र नगरीमा व्यस्त हाँस्य कलाकार को अगाडी छन् । रेडियो नाटक बाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका पौडेल अहिले सिनेमामा चल्तिका मुख्य कलाकार हुन् । उनि बिशेषत नेपाल टेलिभिजन बाट महका श्रृंखला आउँदा बढी चर्चित थिए । त्यो भन्दा बढि चर्चा उनलाई जिरे खुर्सानीले दियो । जिरे खुर्सानी झण्डै एक दशक एनटिभीमा प्रसारण हुने चर्चित हाँस्य श्रृंखला हो । शिवहरि र जितु नेपाल यसका निर्देशक थिए । यहि श्रृंखलाबाट पौडर सबै दर्शकको मनमनमा बस्न सफल भए । तर पछिल्लो समय नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने अधिकांश टेलिचलचित्रहरु बन्द भइसकेका छन् ।
यसले गर्दा आफुलाई निकै नराम्रो महशुस हुने गरेको बताउछन कलाकार राजारम पौडेल । उनि भन्छन “कुनै समय यस्तो पनि थियो नेपाल टेलिभिजनमा टेलिचलचित्रहरु भरिभराउ थिए । हामी सबैले त्याहि बाट धेरै अवसरहरु प्राप्त गरिउ“ । नेपालको एक मात्र सरकारी टेलिभिजनमा देखिन पाउदा अत्यन्तै खुशि हुने गर्दे उनि । राजाराम गर्वका साथ भन्छन “म आज सम्म पनि नेपाल टेलिभिजन भन्दा बाहेकका अन्य टेलिभिजन हेर्दिन“ । नेपाल टेलिभिजन बाट प्रसारण हुने धेरै टेलिचलचित्रहरु बन्द भए पछि त्याँहा काम गर्ने सबै कलाकार हरुले आ आफ्नै गन्तव्य रोजिसकेका छन् । र नेपाल टेलिभिजन ले पनि त्यस्ता टेलिचलचित्रहरु बन्द भए पस्चात विभिन्न निजि क्षेत्रलाई समय बेचेर अन्य कार्यक्रमहरु प्रसारण गरिरहेको छ । र नेपाल टेलिभिजनको यो प्रबृत्ती पिटिक्कै मन नपरेको बताउछन उनि ।
उनि भन्छन् “सरकारी टेलिभिजन भनेको देशकै गहना हो तर उस्ले पनि समय बेचेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको देख्दा सारै चित्त दुख्दो रहेछ“ । उनि भन्छन् “ हामीलाई कलाकारका रुपमा स्थापित गर्ने नेपालको एकमात्र सरकारी टेलिभिजन अहिले टेलिचलचित्र बिहिन भएको छ । यो हामी कलाकारहरुका निम्ति सारै चित्त दुख्ने कुरा हो “। टेलिभिजनले आत्मसाथ गर्न नसक्नु र सधै अर्कैको बाटो हेर्ने प्रबृत्तीले सबै टेलिचलचित्र बन्द हुन पुगेको उनको बझाई छ । र अझै पनि नेपाल टेलिभिजनले आफ्नै लगानीमा त्यस्ता टेलिचलचित्र हरुको पुनः उत्पादन र प्रसारण गरोस भन्ने चाहाना आफ्नो रहेको उनि बताउछन् । यसका लागि को बोल्ने ? बोलेको कुरा कस्ले सुन्ने ? राजारामको यो प्रश्नको जवाफ अधिकांश हाँस्य कलाकार र उनका शुभ चिन्तकले खोजि रहेका छन् ।